Ndichazomboona Madzitateguru Angu Here? Vachamutswa here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
MUNGUVA yakapfuura, pepanhau rokuKorea rinonzi The Chosun Ilbo, rakabudisa musoro wenyaya waikwezva. Rakabvunza kuti: “‘Shim Cheong Akanga Akanaka Chaizvo,’ Asi Asingatombozivi nezvaJesu—Akaenda Kuhero Here?”
Musoro wenyaya uyu waishatirisa nokuti Shim Cheong musikana anodiwa chaizvo wemune imwe ngano yekuKorea, akapa upenyu hwake kuti abatsire baba vake vaiva bofu. Ange achirumbidzwa chaizvo kwemakore. MuKorea, Shim Cheong akatosvika pakuonekwa semuenzaniso wakanaka wemwanasikana akazvipira.
Kune vakawanda, pfungwa yokuti munhu akadaro aizorangwa mumoto wehero nokungoti chete akanga asina kubhabhatidzwa semuKristu yairatidza utsinye, uye yaitogumbura. Pamusoro pezvo, nyaya yacho inonzi yakaitika mashoko ane chokuita naKristu asati aparidzwa mumusha wemusikana iyeye.
Nyaya yacho yaisanganisira kubvunzurudzwa kwakaitwa mumwe mufundisi. Akabvunzwa kana vose vakafa vasati vawana mukana wekudzidza nezvaJesu vakatongerwa kunotsva muhero. Akapindura sei? Akati, “Hatizivi. Tinongofungidzirawo kuti pane zvichaitwa naMwari [nezvevanhu vakadaro].”
MUNHU ANOTOFANIRA KUBHABHATIDZWA KUTI APONE
Bhuku rinonzi The New Catholic Encyclopedia rinoti: “Munhu anotofanira kubhabhatidzwa kuti aponeswe. Sezvakataurwa naKristu pachake, munhu haapindi muUmambo hwaMwari kunze kwekunge aberekwazve nemvura neMudzimu Mutsvene (Jn 3.5).” Mashoko aya anoita kuti vamwe vafunge kuti vaya vakafa vasina kubhabhatidzwa vanokandwa mumoto wehero kana kuti vanotambura neimwe nzira.
Panewo vamwe vakawanda vanofunga kuti pfungwa iyoyo haina musoro. Vanhu vanosvika mamiriyoni vakafa vasingazivi Bhaibheri. Vanofanira kutambudzwa nokusingaperi here? Bhaibheri rinotii panyaya iyi?
TARIRO INOVIMBISWA MUBHAIBHERI
Bhaibheri rinoratidza zvakajeka kuti Mwari haarangi vanhu vakararama vasingazivi zvaanoda. Mabasa 17:30 inotivimbisa kuti: “Mwari akafuratira nguva dzokusaziva kwakadaro.” Saka Bhaibheri rinopa tariro yei nezvevakafa vasati vawana mukana wekudzidza nezvaMwari?
Vimbiso yaJesu yokuti: “Uchava neni muParadhiso” inorevei?
Tinogona kuwana mhinduro mumashoko akataurwa naJesu kune mumwe wevatadzi vakaurayiwa pamwe chete naye. Murume wacho akati kuna Jesu: “Mundiyeukewo kana mapinda muUmambo hwenyu.” Jesu akapindura kutii? “Chokwadi ndinokuudza nhasi, uchava neni muParadhiso.”—Ruka 23:39-43.
Jesu aivimbisa kuti murume wacho aizoenda kudenga here? Kwete. Murume wacho akanga asina ‘kuberekwazve’ nemvura nemudzimu, chinova chinhu chaidiwa kuti apinde muUmambo hwekumatenga. (Johani 3:3-6) Asi Jesu akanga achivimbisa kuti mutadzi wacho aizoraramazve muParadhiso. Sezvo aiva muJudha, murume wacho anofanira kunge aiziva nezveParadhiso yepanyika, munda weEdheni, unotsanangurwa mubhuku rekutanga reBhaibheri. (Genesisi 2:8) Vimbiso yaJesu yakamupa tariro yokuti aizomutswa kuti ararame muParadhiso kana yadzorerwazve panyika.
Bhaibheri rinotovimbisa kuti kuchava “nokumuka kwevakarurama nevasina kururama.” (Mabasa 24:15) “Vasina kururama” ndevaya vasina kurarama maererano nezvinonzi naMwari ndizvo zvakarurama, nokuti vakanga vasingazivi zvaanoda. Jesu achamutsa mutadzi iyeye asina kururama akataura naye, uye mamiriyoni kana kuti zvimwe mabhiriyoni, akafa asingazivi zvinodiwa naMwari. Uye muParadhiso yepanyika, vachadzidziswa zvavanotarisirwa naMwari kuti vaite, uye vachava nemukana wekuratidza kuti vanoda Mwari kuburikidza nekuteerera mirayiro yake.
KUMUTSWA KWEVASINA KURURAMA
Vasina kururama pavachamutswa, vachatongwa maererano nezvavaiita vasati vafa here? Kwete. VaRoma 6:7 inoti: “Uya anenge afa asunungurwa pachivi chake.” Vasina kururama vachange vabhadhara zvivi zvavo kuburikidza nekufa. Saka vachatongwa maererano nezvavachaita pashure pekunge vamutswa, kwete zvavakatadza vasingazivi vasati vafa. Vachabatsirwa sei?
Pashure pekumutswa, vasina kururama vachava nemukana wekudzidza mitemo yaMwari ichapiwa pachavhurwa mipumburu yekufananidzira. Vachabva vazotongwa “maererano nemabasa avo,” kureva kuti maererano nokuti vanoteerera mitemo yaMwari here kana kuti kwete. (Zvakazarurwa 20:12, 13) Vakawanda vasina kururama, vachawana mukana wavo wekutanga wekuti vawane upenyu husingaperi panyika kuburikidza nokudzidza uye kuita kuda kwaMwari.
Dzidziso iyi yeBhaibheri yakabatsira vakawanda kuti vavezve nekutenda muna Mwari. Yeong Sug ndemumwe wavo. Akakura akazvipira muchechi yeRoma. Vamwe vemumhuri yake vaiva vapristi. Aida kuva sisita weRoma, saka akaenda pachikoro chinodzidziswa zvousisita. Asi akazobva nokuti akaodzwa mwoyo nezvaiitika ipapo. Uyewo akanga asingabvumi dzidziso yemoto wehero nokuti aifunga kuti kupisa vanhu mumoto kwaisazoratidza rudo uye matongero akanaka.
Mumwe weZvapupu zvaJehovha akazoratidza Yeong Sug mashoko aya emuBhaibheri: “Vapenyu vanoziva kuti vachazofa; asi vakafa havana kana chavanoziva, havasisina kana mubayiro.” (Muparidzi 9:5) Chapupu chacho chakamubatsira kuziva kuti madzitateguru ake haasi kutambudzwa mumoto wehero. Asi vakarara murufu vachimirira kumutswa.
Kuziva kuti vanhu vakawanda havana kumbobvira vanzwa chokwadi chiri muBhaibheri kwakaita kuti Yeong Sug ateerere mashoko aJesu ari pana Mateu 24:14 anoti: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika.” Iye zvino ari kuparidza mashoko akanaka uye ari kuudza vamwe nezvetariro yake yakanaka chaizvo yemuBhaibheri.
Bhaibheri rinotiudza kuti “Mwari haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.” (Mabasa 10:34, 35) Izvi ndizvo zvataizotarisira tose zvedu kuna Mwari “anoda kururama nokururamisira.”—Pisarema 33:5.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndichazomboona Madzitateguru Angu Here?